SOMALILAND OO XIRIIRKA U JARTAY IIRAAN -SHEEKO WAALAN | Gaaloos.com
Home » galmada » SOMALILAND OO XIRIIRKA U JARTAY IIRAAN -SHEEKO WAALAN
SOMALILAND OO XIRIIRKA U JARTAY IIRAAN -SHEEKO WAALAN
Maamulka SNM oo sheegay inay Shiicada Iran xidhiidh la samaysanayaan si ay aqoonsi caalami ah u helaan. Xoolaha ka dhoofa dekedda Berbera ee Soomaaliya , ayaa intooda badan waxa loo dhoofiyaa wadamada Muslimiinta ee Khaliijka oo dawladda Iran ee Shiicada ahi duulaanka ku tahay .
Wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaan waxaan uga digaynaa kooxdan SNM oo dhiigya cabka ah oo horay uga abuurtay koonfurta Soomaaliya Alshabaab si ay aqoonsi u helaan , oo caalamka intiisa kale uga dhaadhiciyaan in iyagu nabad haystaa sidaa awgeedna loo aqoonsado dawlad , inaanay khal khal gelin amnigooda iyo in gacanka Cadmeed Shiicada iyo SNM wada socdaa fawdo ka abuuraan,
sidii ka dhaccaysay koonfurta Soomaaliya labaatankii sano oo ina soo dhaaftay . Si taa looga hortago waa in Xoolaha Soomaaliyeed oo Khaliijka aadayaa ay ka dhoofaan Dad iyo degaan la saaxiib ah Khaliijka sida Beesha Daarood Ismaaciil degaanadooda , oo marna raali ka noqonayn in wax loo dhimo amniga iyo xasiloonida walaalaha Carbeed oo xiriirka dhaqaale, dhaqan, siyaasad iyo luqad ka dhexeeyey qarniyo badan.
Warbaahinta maamulka SNM-ta ayaa ilaa shalay daabacayay sidii maamulka hargeysa uu xidhiidh fiican la sameeyo dawlada iiraan oo dawlada soomaaliya xidhiidhka u jartay
Dhinaca kale halka hoose ka daawo dawladda soomaaliya oo xidhiidhkii u jartay iiraan
Title: SOMALILAND OO XIRIIRKA U JARTAY IIRAAN -SHEEKO WAALAN